सामान्य - यात्रा समाचार | यात्रा समाचार (पृष्ठ २)
यदि तपाईं केहि दिनको लागि भाग्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, यो तपाईंको उत्तम मौका हो। Bud० यूरो र धेरै सस्तो आवासको लागि बुडापेस्टको लागि उडान। आउनुहोस्?
गुआडालाजाराको ड्युक्स अफ इन्फ्यान्टोको प्यालेस, क्यास्टिलियन-ला मन्चा शहरको सबैभन्दा सुन्दर भवन हो। स्मारक घोषणा गर्‍यो ...
रोमको मुख्य स्मारकहरू
रोमका स्मारकहरू धेरै छन् र कुनै श doubt्का बिना शहरको यात्रामा कुनै पछाडि नछाड्ने सूची बनाउनुपर्दछ।
एक यात्रा अग्रिम मा बुकिंग को लाभहरु
अग्रिम यात्रा बुकिing गर्दा फाइदाहरूको एक श्रृंखला हुनसक्दछ जुन केवल अधिक योजनाकारहरूलाई थाहा हुन्छ, जस्तै महत्वपूर्ण बचत।
Ice० यूरो मात्र भेनिसमा उडान प्रस्ताव
एक उडान प्रस्ताव जुन प्रत्येक दिन देख्दैन। तसर्थ, यदि तपाइँ भेनिस जाने विचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने, यहाँ तपाइँको ठूलो अवसर छ। के तपाइँ यसलाई याद गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
अमेरिका संस्कृति र इतिहासमा धनी महाद्वीप हो र केन्द्रीय अंशको म्यान विरासत छ जुन मेक्सिकोमा सीमित छैन, जस्तै केही अनुपस्थित दिमागका ग्वाटेमाला परम्परा र रीतिथितिहरूले सम्पन्न भूमि हो, केही पूर्व-हिस्पैनिक मूलका हो, अरूले विरासतमा पाए। स्पेन। आफैलाई तिनीहरूसँग आश्चर्यचकित गर्नुहोस्!
बच्चाहरूसँग एक सप्ताहन्तको लागि योजनाहरू
बच्चाहरूसँग सप्ताहन्त योजनाहरू सम्पूर्ण परिवारको आनन्द लिनका लागि हुन्, त्यसैले हामी धेरै विविध र रमाईलो विचारहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
केवलeयूरोको लागि इबीसामा उडान गर्नुहोस्
यो एक प्रस्ताव हो कि उडेर जान्छ, र कहिले राम्रो भनेको छैन। किनभने iz यूरो को लागी Ibiza को यात्रा, राउन्ड ट्रिप, सधैं दृश्यात्मक हुँदैन। आफैले उपचार गर्नुहोस्!
वारसा पोल्याण्डको राजधानी हो र यसको पछाडि धेरै इतिहास छ, तर यसले पर्यटकहरू पनि प्रस्ताव गर्न पुग्दछ।
बै think्ककमा आँधीबेहरीको यात्रा तपाईलाई सोचे भन्दा कम पैसाको लागि
हामी तपाईंलाई एउटा विशेष अफरको साथमा छोड्छौं जसको गन्तव्य बैंकक हो। तपाईले दिमागमा राखेको भन्दा कम पैसाको लागि बढी होटल उडान गर्नुहोस्। यो नछुटाउ!।
उडान + होटेल टेनेरिफमा १174 युरोका लागि
यस प्रस्तावको फाइदा लिनुहोस् जुन तपाईं १ Ten3 यूरोमा टेनेरिफमा days दिन खर्च गर्नुहुनेछ, जहाँ दुबै उडान र होटेल पहिले नै सामेल छन्।
सस्तो यात्राको लागि गन्तव्य बिना उडानहरू
गन्तव्य बिना उडान एक धेरै संभावना सीमित बजेटको साथ धेरै स्थानहरूमा यात्रा गर्न सक्षम हुन राम्रो सम्भावना हो।
संस्कृतिहरूको मिश्रणको परिणाम स्वरूप, धेरै शताब्दीयौंसम्म चलेको प्रक्रियामा, एक विशिष्ट संस्कृति एक महानको जन्म भएको थियो ...
अष्ट्रेलियाको रीतिथितिको इ England्ल्यान्डसँग धेरै सम्बन्ध छ किनकि यो एक औपनिवेशिक देश हो जहाँ धेरै आप्रवासीहरू र संस्कृतिहरूको मिश्रण रहेको छ।
जर्मनीको रीतिथितिले हामीलाई उनीहरूको जीवनशैली र जर्मनहरूको चरित्रको बारेमा धेरै कुरा बताउँदछ, त्यहाँ यात्राको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा।
दक्षिण कोरियाली चलन
केहि समयको लागि, सायद एक दशक पछि, दक्षिण कोरिया लोकप्रिय संस्कृतिको विश्व नक्सामा रहेको छ। किन? तपाइँको संगीत शैली को कारण, तपाइँ दक्षिण कोरिया जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईं निश्चित रूपमा नाटक र के-पप मन पराउनुहुन्छ तर तपाईं त्यहाँ खुट्टा सेट गर्नुभन्दा पहिले, तपाईं कसरी कोरियाली चलन को बारे मा केहि सिक्न?
फ्रान्स को भन्सार
जब हामी यात्राको तयारी गर्छौं त्यहाँ हामीले बिचार गर्ने थुप्रै चीजहरू हुन्छन् त्यसैले सबै कुरा ...
आयरल्याण्डको रीतिथिति धेरै धनी र विविध छ, मुख्यतया पुरानो सेल्टिक संस्कृतिसँग मिसिएको छ जुन अझै जीवित छ।
अर्जेन्टिना मूलतः आप्रवासीहरूको देश हो, यद्यपि यसको भूगोल यति विस्तृत छ कि तपाईं कहाँ जानुहुन्छ त्यसमा निर्भर भई तपाईं अर्जेन्टिनामा जाँदै गरेको भन्सारको सम्पर्कमा आउनुहुनेछ र अलि बढी जान्न चाहानुहुन्छ? त्यसोभए उनीहरूका केही चलनहरू, खाद्य पदार्थहरू, विशिष्ट पेयहरू, मनोवृत्तिहरू र सामाजिक चलनहरू जान्नुहोस्।
जापान मेरो मनपर्ने गन्तव्य हो, म मेरो जन्मभूमि पछाडि संसारमा मेरो ठाउँ भन्न सक्छ। मलाई जापान मन पर्छ, यति धेरै म पछि छुट्टीमा परेको छु यी तीनलाई। के तपाई जापान जाँदै हुनुहुन्छ? तब उनीहरूलाई कसरी प्रतिक्रिया देखाउने भनेर जान्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जापानी प्रचलनहरूको बारेमा फेला पार्नुहोस्। र कुन गर्न सक्नुहुन्न!
मेक्सिको को पेट्रोनामी
जब खानाको कुरा आउँदछ, मेक्सिकोका एक भनाइ छ "पूर्ण पेट, खुशी हृदय"। जेसुकै होस…
संयुक्त राज्य अमेरिका परम्परा
अमेरिकी चलचित्र र शृ्खलाले हामीलाई असंख्य अवसरहरूमा अमेरिकी जनताको चलन देखाउँदछ। हामी सायद ...
इटालीको ग्यास्ट्रोनमीमा व्यञ्जनहरू छन् जुन उनीहरूको लोकप्रियता र रुचिकर मानिसहरूसँग विश्वभरि गएका छन्।
फ्रान्स को पेट्रोनामी
फ्रान्सको एक महान ग्यास्ट्रोनोमी छ, तपाईंलाई यसको स्वादको रूपमा तपाईंलाई स्वागत गर्न इच्छुक भन्दा बढी। उत्तम पेस्ट्रीबाट एक साधारण र देहातीमा। तपाईं फ्रान्स जाँदै हुनुहुन्छ? संग्रहालयहरु र महलहरु को बाहेक यसको ग्यास्ट्रोनोमी छ। फ्रान्कीस पकाउने मीठो र नुनिलोमा अद्भुत छ। खानु!
हवाइजहाजमा हात सामान, तपाईंलाई के जान्नु आवश्यक छ
हात सामानको केहि नियम र उपायहरू छन् जुन पछ्याउनुपर्दछ, त्यसैले यसको आवश्यकताहरू बारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
देशको विशिष्ट पोशाक यसको सांस्कृतिक र ऐतिहासिक नमूना हुन्। कोलम्बियाली मामिलामा, लोककथा ...
नाभेरोमा नासेडेरो डेल उरेडेरा प्राकृतिक पार्कले हामीलाई परिवारसँग रमाइलो गर्न एक महान प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदान गर्दछ।
इटालीको विशिष्ट पोशाक
सामान्य इटालियन वेशभूषामा विशाल संग्रह छ, रेनासेन्स, रोमन प्रेरणा, र भेनिसियन पोशाकका टुक्राहरूसँग।
न्यु योर्कमा चार दिन तपाईलाई सोचे भन्दा कम पैसाको लागि
हामी तपाईलाई न्यूयोर्कको यात्राको प्रस्ताव ल्याउँदछौं, तपाईले सोचेभन्दा कम मूल्यका लागि। चार दिनको यात्रा जुन तपाईंलाई प्रेममा फस्नेछ।
मल्लोर्कामा आर्टá को गुफामा भ्रमण
पुरातन आर्टको गुफाहरू मल्लोर्कामा अवस्थित छन् र पुरानो संरचनाहरूको साथ यस टापुको चाखलाग्दो भ्रमण प्रस्ताव गर्छन्।
मेक्सिकोको विशिष्ट पोशाक
देशको विशिष्ट पोशाक, ग्यास्ट्रोनमी वा संगीत जस्ता, यसको लोककथाको अभिव्यक्ति हुन्। खुल्ला ...
Vila Real de Santo Antonio मा के हेर्ने
पोर्तुगाली शहर Vila रियल डी सान्तो एन्टोनियो एक शान्त ठाउँ छ र Algarve क्षेत्रमा अवस्थित सुन्दर समुद्री तटहरू सहित।
सियरा डि Huelva मा सबै भन्दा सुन्दर गाउँहरु
सियरा डि हुवेल्वामा त्यहाँ धेरै सुन्दरताका केही गाउँहरू छन्, जसका धेरै ऐतिहासिक ठाउँहरू पनि छन्।
यदि तपाईं पेरिसमा एकदम सस्तो मूल्यको लागि यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने, आज हामी तपाईंलाई देखाउने प्रस्तावलाई नभुल्नुहोस्। दुबै उडान र होटेलले तपाईंलाई विश्वास दिलाउनेछ।
२ day यूरोका लागि एक दिनको लागि लन्डन भाग्नुहोस्
अब तपाई एक दिनको लागि लन्डनमा भाग्न सक्नुहुन्छ २ 25 यूरो मात्र। अनौंठो अवसर जुन तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्न!
केवल 65 XNUMX यूरोको लागि एम्स्टर्डममा उड्नुहोस्
अब तपाईं एम्स्टर्डममा उडान गर्न सक्नुहुनेछ किनकि तपाईंले सोचेभन्दा कमको लागि। तपाईंसँग यसको सबै कुनामा पत्ता लगाउन एक हप्ता हुनेछ। आउनुहोस्?
रोन्डा मा के हेर्ने
रोन्डा स्पेनको सब भन्दा पुरानो र सुन्दर शहरहरू मध्ये एक हो। यो मालागा प्रान्तमा अवस्थित छ र ...
केवल १२ यूरोको लागि मल्लोर्कामा उडान गर्नुहोस्
मल्लोर्का तपाईंको छुट्टिहरु खर्च गर्न को एक मुख्य गन्तव्य हो। यदि तपाईं धेरै कम तिर्न चाहानुहुन्छ भने, for दिनको लागि यो उत्तम प्रस्तावलाई नबिर्सनुहोस्।
Albacete मा राओ मुन्डो को माध्यम बाट पैदल
सियरा डेल सेगुरा र सियरा डे अल्कारज बीच, अल्बासेट, लस कलरस प्राकृतिक पार्क हो ...
चकलेट संग्रहालयको आनन्द लिनुहोस्, थुप्रै संस्था र परिवार संग साझा गर्न विभिन्न आकर्षणहरु वा प्रदर्शन संग एक संस्था उपस्थित संस्था।
प्राग of दिनको मजा लिदै
जुलाईमा पाँच दिनको यात्रा ठूलो आउटलेट हुन सक्छ। तर अब होइन, हामीले प्राग, एउटा अविश्वसनीय शहरको आनन्द लिनको लागि आदर्श मूल्य फेला पार्‍यौं।
जान मा सियरा Magina प्राकृतिक पार्क
सियरा म्यागीना प्राकृतिक पार्कले हामीलाई उत्कृष्ट सुन्दरता, पैदल यात्रा ट्रेल्स र महलहरू सहितको साना गाउँहरूको प्राकृतिक परिदृश्य प्रदान गर्दछ।
बास्क पिन्चोस, सम्पूर्ण ग्यास्ट्रोनोमिक परम्परा
बास्क पिन्चोस आकर्षणको एक हिस्सा हो जसले धेरै पर्यटकहरूलाई सुन्दर बास्क देश भ्रमण गर्न उत्प्रेरित गर्छ, एक स्वादिष्ट खानाको साथ जुन सानो परोबामा चाख्न सकिन्छ।
Caldera de Taburiente भ्रमण गर्नुहोस्
के तपाइँ यस गर्मीमा क्यानरी टापुहरूमा जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसोभए ला पाल्मा टापुको भ्रमण गर्नुहोस् र शानदार Caldera de Taburiente लाई चिन्नुहोस्। यो विशाल र सुन्दर छ!
गर्मीमा रोम, उडानको फाइदा लिनुहोस् e० यूरोमा
गर्मी मा हामी पनि सोचे भन्दा कम पैसा को लागी यात्रा गर्न सक्छौं। यस केसमा हामी केही दिनहरू, र 60० यूरोको लागि रोम यात्रा गर्नेछौं। यस जस्तो प्रस्तावको मजा लिनुहोस् किनकि यो दुई पटक सोच्नको लागि लामो समय सम्म रहँदैन। आफ्नो झोला तयार पार्नुहोस्!
एक स्वयम्सेवकको रूपमा निःशुल्क यात्रा गर्नुहोस्
धेरै संसारमा र विभिन्न मिसनहरु संग स्वयंसेवी कार्यक्रमहरु छन्, हामी संसारलाई हेर्दा एक स्वयंसेवक को रूपमा नि: शुल्क यात्रा।
उडान र आवास दुई रात माराकेचमा e० यूरो को लागी
यदि तपाईं एक पछाडि जाने योजना गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने, उत्तम समय आयो। माराकाचमा दुई रातको लागि उडान र आवासको लागि 60० यूरो लाग्नेछ। के तपाइँको दिनचर्यालाई दुई दिनको लागि अलग राख्नको लागि यो उत्तम तरिका छैन?
थाईल्याण्डमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू भ्रमण गर्नुहोस्
थाईल्यान्डमा सबैभन्दा उत्तम समुद्री किनारहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईं यस सुन्दर देशको लागि आफ्नो यात्रामा बिर्सनुहुन्न, व्यस्त देखि अनस्पाइल गरिएकोमा।
अन्तर्राष्ट्रिय खोप प्रमाणपत्र के हो?
तपाईको यात्राको कारण जेसुकै होस्, हाम्रो स्वास्थ्यको देखभाल गर्न उपायहरू सधैं लिनुपर्दछ। विशेष गरी जब ...
हामी रोममा see दिनमा के देख्न सक्छौं?
तीन दिनमा रोम भ्रमण गर्न गाह्रो छ, तर हामी तपाईंलाई सबै कुरा कभर गर्न सक्षम हुनको लागि के चाहानुहुन्छ भन्न सकिन्छ भनेर बताउँछौं।
वाडी रम, जोर्डनको मरुभूमिको भ्रमण
वाडी रम मरुभूमि जोर्डनमा अवस्थित छ र पेट्रा पछि यो मुख्य पर्यटक आकर्षण हो, एक मरुभूमि जहाँ धेरै गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न।
अस्टुरियसको सोमिडो तालहरू भ्रमण गर्नुहोस्
सोमिडो तालहरू अस्टुरियसमा, सोमिडो प्राकृतिक पार्कमा छन् र केहि राम्रा पैदल यात्राको लागि धन्यवाद देखिन सकिन्छ।
टेनेराइफमा लस गिगन्तेस क्लिफ्स
टेनेरिफमा लस गिगान्ट्स चट्टानहरू यसको सब भन्दा पर्यटकीय क्षेत्रहरू मध्ये एक भएको छ, किनकि उनीहरूले पूर्ण र चाखलाग्दो अनुभव प्रस्ताव गर्छन्।
टेनेरिफमा १० सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
यी 10 टेनिरफमा XNUMX सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू हुन्, महान बालुवा क्षेत्र जुन यस टापुको प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदर्शन गर्दछ।
बार्सिलोनामा सर्वश्रेष्ठ टेरेसहरू
वसन्तले ल्याउने एउटा सुखद सुखद पेय पाउन टेरेसमा बस्नु हो ...
कुएनकाको जादू गरिएको शहरको भ्रमण गर्नुहोस्
यदि तपाईं अझै कुचेन्का सहरको शहर थाहा पाउँनुहुन्न भने, तपाईं एक प्राकृतिक ठाउँ को माध्यम बाट एक रोचक यात्रा हराइरहेको छ कि अविश्वसनीय चट्टान संरचनाहरु प्रदान गर्दछ।
के Leuven शहर मा हेर्न
ल्युभेन शहर ब्रसेल्सबाट केही किलोमिटर मात्र अवस्थित अवस्थित छ र यस विश्वविद्यालय शहरलाई जान्नको लागि उत्तम भ्रमण हो जुनसँग धेरै प्रस्तावहरू छन्।
Bran Castle चिन्नुहोस्
यदि तपाईंलाई काउन्ट ड्र्याकुलाको कथा मनपर्‍यो भने, तपाईं रोमानियाको ब्यान क्यासल भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ ... र अविस्मरणीय हेलोवीन रात पनि खर्च गर्न सक्नुहुन्छ!
नेरजामा के हेर्ने, दक्षिणमा एउटा पर्यटन शहर
नेरजाको आरामदायी मालागा शहरमा तपाईले देख्न सक्ने सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्, बाल्कन डे यूरोपा र यसका पुराना गुफाहरूका लागि परिचित।
भेरोनामा के हेर्ने
इटालियन शहर भेरोना केवल रोमियो र जुलिट बस्ने ठाउँ थिएन, तर यसले स्मारकहरू र चर्चहरूको भ्रमणको लागि एक ठूलो चयन प्रदान गर्दछ।
लोफोटेन टापु, नर्वेमा स्वर्ग
के तपाई इस्टरको लागि केहि विशेष योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईं नर्वे कसरी जान सक्नुहुन्छ? त्यहाँ, आर्कटिक सर्कल माथि, सुन्दर लोफोटेन टापुहरू छन्।
अस्टुरियसमा सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
अस्टुरियसमा उत्तम समुद्री तटहरू पत्ता लगाउनुहोस्, सुन्दर अस्थि तटवर्ती तटमा अवस्थित समुद्र तटहरू, प्राकृतिक स्पेसले घेरिएको, विश्वमा केही अनौंठो।
सिन्ट्रा, पोर्तुगिज शहरमा के हेर्ने र के गर्ने
पोर्सिगाली शहर सिन्ट्रामा के हेर्ने र के गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्, लिस्बनबाट थोरै टाढा, महलहरू र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको शहर।
अक्सफोर्ड २०१olk मा टोकिएनमा प्रदर्शनी आयोजना गर्ने
२०१ 2018 मा, जेआरआर टोलकिएनको फिगरको बारेमा एक प्रमुख प्रदर्शनी अक्सफोर्डमा आयोजित हुनेछ जुन आकर्षित गर्ने वाचा गर्दछ ...
सेभिलमा के हेर्ने
सेभिल शहरमा तपाईले देख्न सक्ने सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्, प्रसिद्ध गिराल्दादेखि यसको क्याथेड्रल वा फ्लामेन्को डान्सको रोचक संग्रहालय सम्म।
विश्व शैली २०१ in मा चिनियाँ नयाँ वर्ष मनाउँछ
गत शुक्रबार चिनियाँ समुदायले नयाँ साल मनायो, विशेष गरी यसको पात्रो अनुसार 4716 XNUMX१XNUMX, सबैभन्दा परम्परागत बिदा ...
सचेतताको अभावले नाज्कालाई जोखिममा पार्छ
पेरूमा, नाज्का र पाल्पा शहरहरू बीच, सब भन्दा लोकप्रिय पुरातात्विक रहस्यहरू मध्ये एक अवस्थित छ ...
गोल्ड अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, यात्रा को लागी एक उत्तम हो, र यहाँ हामी तपाईंलाई फाईदा को एक श्रृंखला भन्छौं कि तपाईं यो संग हुनेछ।
मेजोरदा डेल क्याम्पोमा जस्टोको क्याथेड्रल, सांस्कृतिक रुचिको सम्पत्ति?
पहिलो ढु 1961्गा अक्टूबर १ XNUMX in१ मा भर्जिन डेल पिलरको दिनमा आज सम्म राखिएको, ...
Apps अनुप्रयोगहरू जुन तपाईंलाई तपाईंको यात्रा व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ
यी apps अनुप्रयोगहरू हुन् जुन तपाईंलाई तपाईंको यात्रा व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्दछ: सार्वजनिक यातायात, मौसम, आवास, अनुवादक र भ्रमणहरूका लागि सिफारिसहरू।
क्रिस्टल सफा पानीको साथ भव्य समुद्र तटहरूको खोजीमा छुटाउनको लागि केही उत्तम यूरोपीय गन्तव्यहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
CR7 ले माराकेच, म्याड्रिड र न्यू योर्कमा नयाँ होटलहरू खोल्नेछ
यदि त्यहाँ खेल विश्व स्तर को कोटी को दुनिया मा लाखौं प्रशंसक को श्रेणी को माथि उठाइएको छ भने ...
सीएनएनका अनुसार २०१ 12 मा १२ गन्तव्यहरू बेवास्ता गर्न
सीएनएनले भर्खरको १२ स्थलहरूको सूची प्रकाशित गर्‍यो जुन पर्यटकहरूले छुट्टीमा पर्दा वेवास्ता गर्नुपर्छ ...
ग्यालिसियामा कोरुबेडो डुने कम्प्लेक्सको भ्रमण गर्नुहोस्
कोरुबेडो डुबे कम्प्लेक्स गालीलियामा अवस्थित छ रबिराको समुद्री तटमा रहेको शहर र ठूलो सुन्दरताका प्राकृतिक ठाउँहरू प्रदान गर्दछ।
के तपाईंले आजोरमा यात्रा गर्ने सपना कहिले देख्नुभएको छैन?
आज हामी तपाईंलाई एजोरिस टापुहरूको लागि एक अद्भुत यात्रा प्रस्ताव लिएर आएका छौं। यदि तपाईं सँधै उनीहरूसँग यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ भने यो अवसर हो।
जनवरी १ On मा, Ryanair ले यसको नयाँ प्रतिबन्धित ब्यागेज नीति संचालनमा ल्यायो, जसले कुनै पनि अपलोडलाई अनुमति दिँदैन ...
सेन्ट मार्क स्क्वायर निश्चित रूपमा भेनिसको ऐतिहासिक प्रतीक हो। हरेक बर्ष लगभग million करोड मानिस ...
कसरी एक कार यात्रा को योजना र आनंद
कार यात्रा लिनु भनेको पूरै रमाईलो र रमाईलो अनुभव हुन सक्छ, तर तपाईंले योजना बनाउन केहि चीजहरूलाई ध्यानमा राख्नु पर्छ।
एक फरक अनुभवका लागि विश्वमा आईस होटलहरू
आइस होटेलहरू एक धेरै चाखलाग्दो प्रस्ताव हो र हामी अधिक र अधिक फेला पार्न सक्दछौं, लगभग सबै जाडो मौसमको लागि सिर्जना गरिएको।
यो उत्सुकतापूर्ण कुरा हो कि नेपल्सको सबैभन्दा वञ्चित जनसंख्याको भोक मेटाउनको निम्ति खाना खाएको छ।
हाम्रो लेखमा आज हामी स्प्यानिअर्ड्सले भन्दा धेरै यात्रा नगर्ने मुख्य कारणहरू प्रस्तुत गर्दछौं। के तपाईं तिनीहरूमध्ये हुनुहुन्छ?
१० अन्वेषक यात्रुहरूको लागि उपयोगी उपहार
परिवार वा साथीहरूसँग यात्रा गर्नेहरूको लागि, यो तपाईंको यात्रालाई अझ रमाइलो बनाउनको लागि यो उपहार सूची हो।
ओस्लोको भ्रमण गर्नुहोस्, नर्वे II को राजधानीमा के हेर्नुहोस् र के गर्ने
हामी तपाईंलाई ओस्लो शहरको भ्रमणमा थप जोड्नका लागि अरू धेरै योजनाहरू देखाउँदछौं, संग्रहालयले भरिएको ठाउँ र केही अनौंठो मनोरन्जन सहित।
क्रिसमसको लागि म्याड्रिडमा स्केटिंगको मजा लिन ice आइस रि r्क्सहरू
यो क्रिसमस, धेरै परिवारहरू सँगै रमाईलो गर्न र बिभिन्न योजनाहरू बनाउनको लागि आफ्ना साना बच्चाहरूको छुट्टीको फाइदा लिन खोज्छन्। Y…
यस सानो प्रस्ताव संग पेरिस मा वर्ष शुरू गर्नुहोस्
आज, क्रिसमस पूर्वसन्ध्या, हामी तपाइँलाई २०१ end को अन्त्य गर्न गेटवे अफर दिन्छौं र २०१ 2017 लाई फरक तरीकाले सुरू गर्दछौं: यस सानो प्रस्तावको साथ पेरिसमा वर्ष सुरू गर्नुहोस्।
क्रिसमस संसारमा कसरी मनाइन्छ?
यो डिसेम्बर २, हो, क्रिसमसको पूर्वसन्ध्या। यस ग्रहभरि करिब २,२०० मिलियन मानिस ...
ओस्लोको भ्रमण गर्नुहोस्, नर्वे I को राजधानीमा के हेर्ने र के गर्ने
नर्वेको राजधानी ओस्लोमा तपाई के हेर्न र गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा फेला पार्नुहोस्। एउटा संग्रहालय र गर्न सुन्दर भ्रमणहरूले भरिएको शहर।
एक फरक ठाउँमा क्रिसमसको आनन्द लिनको लागि जानुहोस्
हामी केहि getaways को बारे मा कुरा गर्दैछौं जुन क्रिस्मसको समयमा रमाईलो गर्न सकिन्छ, ती ठाउँहरूमा जुन यी तिथिहरू विशेष प्रकारले बाँच्दछन्।
क्युवा, इतिहास र स्वादहरू को पुरानो कफी बागानहरु को बारे मा जान्नुहोस्
के तपाई क्युबा जानुहुन्छ? समुद्र तटमा नजानुहोस्, पर्यावरण पर्यटन गर्नुहोस्! क्युबामा पुरानो कफी बगैंचाहरू छन् सुन्दर परिदृश्यहरूमा यात्रा गर्दा भेट्न।
स्पेनमा १० विशिष्ट क्रिसमस मिठाईहरू
जब हामी यात्रा गर्छौं देशलाई जान्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्, कि त यसको इतिहास, यसको लोककथा, यसको कला वा यसको माध्यमबाट ...
१ Sard सार्डिनिया दोस्रोमा आवश्यक भ्रमणहरू
हामी तपाईंलाई अन्तिम आठ आवश्यक भ्रमणहरू देखाउँदछौं सार्डिनियाको सुन्दर टापुमा, साना शहरहरूबाट निक्षेपहरूसम्म।
१ Sard सार्डिनिया I को आवश्यक भ्रमणहरू
सार्डिनिया टापुमा केही आवश्यक भ्रमणहरू पत्ता लगाउनुहोस्, समुद्र तट, सुन्दर शहरहरू र ऐतिहासिक शहरहरूले भरिएको ठाउँ।
Unique अद्वितीय गन्तव्यहरू पैदल यात्रा गर्न
पृथ्वी अद्वितीय सौन्दर्यले भरिएको ठाउँले भरिएको छ र ती मध्ये धेरै दुर्गम क्षेत्रहरूमा छन् ...
दक्षिणी पोर्तुगलमा भ्रमण गर्न एल्गारवे शहरहरू
यी पोर्चुगलको दक्षिणी भागका सब भन्दा महत्त्वपूर्ण शहरहरू र शहरहरू हुन्, जुन एल्गारभको रूपमा चिनिन्छ, धेरै पर्यटकीय स्थान।
अर्को वर्षको लागि तैयार गर्नुहोस् बच्चाहरूसँग हिउँमा जानको लागि। स्की रिसोर्टमा सम्पूर्ण परिवारको लागि रमाइलो छुट्टी।
यात्रा गर्दा हामी के गल्ती गर्छौं?
आजको आइतवार लेखमा हामी तपाईंलाई नयाँ गन्तव्यको लागि यात्रा गर्दा हामी के गल्ती गर्छौं बताउँछौं। अब तिनीहरूलाई पतंग नबनाउनुहोस्!
Gal गालिसियाको रियास बाइक्ससमा आकर्षक शहरहरू
गालिसियाको रियास बाइक्ससमा पाँच आकर्षक शहरहरू पत्ता लगाउनुहोस्, एक महान व्यक्तित्वको साथ समुद्री तटहरू भरिएको क्षेत्र।
यात्राको क्रममा उत्तम प्लेलिस्टहरू
आजको लेखमा हामी तपाईंलाई अन दि गोमा सबै भन्दा राम्रो संगीत प्लेलिस्टहरू प्रस्तुत गर्दछौं। यात्रामा राम्रो संगीत नछुटाउनुहोस् ... के हामी खेल्छौं?
२० विश्व II मा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको स्मारकहरू
पुरानो शहरहरू सहित विश्वका चारै तिरको यात्रामा दस अन्य स्मारकहरू नछुटाउनुहोस्।
२० म विश्वमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको स्मारकहरू
आज हामी तपाईंलाई संसारमा शीर्ष १० स्मारकहरू देखाउँदछौं जुन हामीलाई लाग्छ कि तपाईंले भ्रमण गर्नुपर्दछ, प्रभावशाली ठाउँहरूको सूची।
पोर्चुगल मा known कम ज्ञात गन्तव्यहरू
पोर्तुगालमा les कम ज्ञात गन्तव्यहरू पत्ता लगाउनुहोस्, ठूलो चासोका स्थानहरू जुन सबैभन्दा लोकप्रिय होइन तर त्यो उत्तम रत्न हो।
के तपाईं डिसेम्बर मा अर्को छुट्टी शनिवार मा लिस्बन जान्न चाहानुहुन्छ?
के तपाईं डिसेम्बर मा अर्को छुट्टी शनिवार मा लिस्बन जान्न चाहानुहुन्छ? आज हामी तपाईलाई पुर्तुगालीको राजधानी जान्नको लागि यो महान योजना ल्याउँदैछौं।
Dest गन्तव्यहरू तपाईंले पोर्तुगलमा भ्रमण गर्नुपर्नेछ
हामी तपाईंलाई पोर्तुगलमा भ्रमण गर्नका लागि चार आवश्यक स्थानहरू बताउँछौं। स्मारकहरू र प्राकृतिक क्षेत्रहरूको साथ चार सुन्दर शहरहरू।
जाडोमा मल्लोर्कामा गर्नु पर्ने कुराहरु
मल्लोर्का एक गर्मी टापु हो, तर कम मौसममा यो यसको मुख्य स्मारकहरू पत्ता लगाउन राम्रो गन्तव्य पनि हुन सक्छ।
O Camiño do Faros de Galicia आठ चरणमा दोस्रो
हामीले पहिले नै तीनवटा चरणहरू देखेका छौं ओ कामिओ डोस फरोस, ग्यालिश तटमा अद्वितीय मार्ग जुन ...
आठ ओटा चरणमा गलिसियामा 'O Camiño do Faros'
O Camiño Dos Faros गालिसियामा एक सुन्दर पैदल यात्रा मार्ग हो जुन उत्तरी किनारमा सुन्दर परिदृश्यहरूको बीचमा बग्दछ।
सबै स्वादको लागि रंगीन समुद्र तटहरू
समुद्र तटहरू केवल सुनौलो वा सेतो छैनन्। त्यहाँ हरियो, रातो, कालो, गुलाबी छन्। यो केवल सबैलाई जान्ने र रमाईलो गर्ने प्रस्तावको कुरा हो। तपाईं हिम्मत?
Ic अनौठो ठाउँहरू गलिसियामा भ्रमण गर्न
हामी तपाईलाई ग्यालिसियाका पाँच अनौंठो कुनाहरू देखाउँदछौं जुन सबैले कुनै न कुनै समयमा शहरहरूदेखि प्राकृतिक ठाउँहरूमा भ्रमण गर्नुपर्दछ।
Ireland 8 know यूरो बाट days दिनमा आयरल्यान्ड जान्नुहोस्
यदि तपाईं एक सुन्दर देश भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ, यहाँ हामी तपाईं को लागि केहि दिन को लागी एक अद्भुत प्रस्ताव ल्याउन: आयरल्यान्ड 8 344 यूरो देखि days दिनमा जान्नुहोस्।
तपाईंको स्कटल्याण्डको भ्रमणमा हेर्न र गर्ने कुरा
रहस्यमय, इतिहास र महल भरिएको मार्गहरू भरिएको स्कटल्याण्डमा हेर्न र गर्न रोचक चीजहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
नि: शुल्क डब्लिन, योजनाहरु र विचारहरु बिना खर्च गर्न मजा
कम बजेटमा यात्रा गर्नेहरूको लागि खर्च नगरीकन आयरिश राजधानीको आनन्द लिने तरिका, डब्लिन नि: शुल्क खोज्नुहोस्।
१,१10१ यूरो बाट १० दिनका लागि बालीलाई चिन्नुहोस्
के सम्झौता: १,१10१ यूरो बाट १० दिनको लागि बालीलाई चिन्नुहोस्! यो शानदार प्रस्ताव डेस्टिनियाको हातबाट आएको हो। तपाईं टापु भ्रमण गर्नुहुन्छ?
लीयुवर्डेन र भालेटा, संस्कृति २०१ European का यूरोपीयन क्यापिटलहरू
एम्स्टर्डमबाट दुई घण्टा अवस्थित, डच शहर लीयुवर्डेन यसको तालहरू र नहरहरूको लागि लोकप्रिय छ ...
लेन, गेस्ट्रोनमी २०१ Spanish को स्पेनिश राजधानी
León, Gastronomy २०१ Spanish को स्पेनिश राजधानी, गत वर्ष भएको एकको उत्तराधिकारी: Huelva। के उत्पादनहरु लेन मा विशेषता हो?
हेलोवीन भगदडका लागि विचारहरू
रमाईलो र भयानक योजनाहरूको लागि हेलोवीन ब्रिज गेटवेका लागि केहि विचारहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
अक्टुबरमा फ्लोरेन्स भ्रमण गर्नुहोस्
के तपाई यस महिना इटाली जाँदै हुनुहुन्छ? अक्टुबर तातो दिनको साथ एक अद्भुत महिना हो। फ्लोरेन्स भ्रमण गर्न नबिर्सिनुहोस् किनकि त्यहाँ धेरै रमाइलो चाडहरू अक्टोबरमा छन्।
लन्डनमा ठाउँहरू जुन तपाईंलाई थाँहा हुन सक्छ
लन्डन शहरमा यी थोरै-ज्ञात ठाउँहरू पत्ता लगाउनुहोस्, भ्रमण जुन सब भन्दा पर्यटन प्रस्ताव भन्दा पर जान्छ।
कोलोजियमले यसको माथिल्लो तह सार्वजनिक गर्न 40० बर्षमा पहिलो पटक खोल्नेछ
भेस्पाशियनद्वारा नियुक्त गरिएको र Tit० एडीमा उनको छोरो टिटस द्वारा सम्पन्न, कोलोसियम प्रतीक हो ...
एक यात्रा को लागी तपाइँको सुटकेस तैयार गर्न को लागी सुझावहरु
हामीले यात्राको लागि सूटकेस तयार गर्न केहि रोचक सल्लाहहरू पत्ता लगाउँनुहोस्, तपाईंलाई आवश्यक र आवश्यक सबै चीजहरूको साथ।
पतनको दौरान गलिसिया भ्रमण गर्ने कारणहरू
गिरावटको मौसममा ग्यालसिया भ्रमण गर्न केहि उत्तम कारणहरू पत्ता लगाउनुहोस्, धेरै चीजहरू हेर्न र गर्नका साथ।
के तपाईं यी कुनै पनि चिलिंग स्थानहरूमा यात्रा गर्न चाहानुहुन्छ?
हामीले आज तपाईंलाई सोध्ने प्रश्न धेरै सरल छ: के तपाईं यी द्रुत स्थानहरूमा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईं कुन पहिले नै जानु भएको छ?
वरिष्ठहरूको लागि कसरी यात्राको योजना गर्ने
थोरै विवरणहरूको बारेमा सोच्दै तिनीहरू वरिष्ठहरूको लागि कसरी यात्रा गर्ने योजना बनाउँनुहोस् ताकि उनीहरू आफ्नो बिदाको आनन्द लिन सक्दछन्।
Gran Canaria मा रुचि का स्थानहरु
ग्रान क्यानरिया टापुमा यी मनपर्ने स्थानहरू पत्ता लगाउनुहोस्, टापु प्राकृतिक ठाउँहरू, ऐतिहासिक केन्द्रहरू र साइटहरू।
चेष्ट मोटोजीपी ग्रान्ड प्रिक्सबाट १ 189eयूरोमा रमाउनुहोस्
आज हामी तपाईलाई बिभिन्न प्रस्तावमा ल्याउँछौं, मोटरसाइकलका ती प्रशंसकहरूको लागि आदर्श: चेस्टे मोटो जीपी ग्रान्ड प्रिक्स १189। यूरोबाट।
थिसन संग्रहालयले यस अक्टुबरमा आफ्नो २th औं वार्षिकोत्सव मनाउँछ
म्याड्रिडको पासेओ डेल प्राडोमा तपाईंले भेट्टाउनुहुनेछ जुन “कलाको त्रिकोण” को रूपमा प्रसिद्ध छ वा ...
पुएन्टे डेल पिलर प्रस्ताव: उडान र लन्डनमा होटल मात्र 320२० यूरोको लागि
आज हामी प्यून्टे डेल पिलर: लन्डनमा केवल 320२० यूरोको लागि उडान र होटेलको लागि हामी तपाईंलाई धेरै रसदार यात्राको प्रस्ताव ल्याउँछौं। तपाइँ साइन अप गर्नुहुन्छ?
टुलूसमा हेर्न र गर्न9चीजहरू
टुलूसमा हेर्न र गर्न9रोचक चीजहरू पत्ता लगाउनुहोस्, एउटा संग्रहालय, कला र सुन्दर भवनहरूले भरिएको एउटा सुन्दर फ्रान्सेली शहर।
Ryanair ले मार्च २०१ 2018 सम्म यसको रद्द उडानहरू विस्तार गर्दछ
Ryanair ले यो फेरि गर्दै छ: यसले मार्च २०१ 2018 सम्म यसको रद्द उडानहरू विस्तार गर्दछ। यहाँ हामी तपाईंलाई अवगत गराउँछौं कुन routes 34 मार्गहरू यी रद्दबन्दीबाट प्रभावित हुनेछन्।
फ्लोरेन्स शहर मा essential आवश्यक भ्रमणहरू
इटालियन शहर फ्लोरेन्समा छ अत्यावश्यक भ्रमणहरू पत्ता लगाउनुहोस्, यसको कला र यसका सबै स्मारकहरूको लागि सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको ठाउँहरू मध्ये एक।
लिस्बन शहरमा निःशुल्कका लागि चीजहरू
लिस्बन शहरमा विभिन्न निःशुल्क चीजहरूको मजा लिनुहोस्। यात्राको लागि यी निःशुल्क गतिविधिहरू थपेर तपाईंको बजेट समायोजित गर्नुहोस्।
यी केहि उडानहरू हुन् जुन रायानेर कम्पनीले रद्द गर्यो
यी केहि उडानहरू हुन् जुन रायानेर कम्पनीले रद्द गर्यो। हाम्रो सूची अक्टुबर १ सम्म जान्छ तर हामी सबै संग लिंक राख्छौं।
यात्रामा जानका लागि राम्रो यूरोपीयन टापुहरू
आइबिजादेखि क्रेटको लागि यस पलको सब भन्दा लोकप्रिय यूरोपियन टापुहरूको यात्राको लागि हामी तपाईंलाई केही विचारहरू दिन्छौं।
सेभिलबाट रोम, राउन्ड ट्रिप, केवल १169eयूरोका लागि। कस्तो सौदा!
आजको प्रस्ताव पर्याप्त "रसदार" छ: सेभिलदेखि रोमसम्म, गोल यात्रा, १ 169, मात्र युरोको लागि। स्काईस्केनरबाट रायनेरको साथ यात्रा गर्नुहोस्।
इन्फान्ट डोन लुइस डे बोअडिल्ला डेल मोन्टेको प्यालेस
सबैभन्दा अज्ञात स्पेनिश स्मारकहरू मध्ये एक बोडिला डेल मोन्टेमा पालासियो डेल इन्फान्ट डान लुइस हो। यो भेटियो ...
कसरी यात्रा को सही तरीका छनौट गर्न को लागी
आज उपलब्ध सबै विकल्पहरूको साथ यात्राको लागि सही प्रकारको निवास कसरी छनौट गर्ने बारेमा केही विचारहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
के हेर्ने र के गर्ने ब्रसेल्स II को शहर मा
ब्रसेल्स शहरमा हेर्न र गर्नका लागि अधिक चीजहरू पत्ता लगाउनुहोस्। ठूला पार्क, दरबारहरू र संग्रहालयहरूको साथ सूचीमा थप गर्न अन्य ठाउँहरू।
ग्रेनाडा मा Alhambra सेप्टेम्बर मा जनता को लागी Torre de la Pólvora खोल्छ
पछिल्लो वसन्तदेखि यो गरिरहेको छ, Alhambra को ट्रस्टी बोर्ड र Granada को जनरलिफ को जनता को लागी खुल्छ ...
के हेर्ने र के गर्ने ब्रसेल्स I को शहर मा
ब्रसेल्स शहरमा के हेर्ने र के गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्, ऐतिहासिक र आधुनिक शहर रमाईलो ठाउँहरू र आवश्यक भ्रमणहरूले भरिएको।
एक सप्ताहन्त getaway का आनंद को लागी सुझावहरु
यात्रामा जानको लागि महान विचारहरूको साथ, कुनै पनि समयमा एक सप्ताहन्त नि: शुल्क आनन्द लिन केही सुझावहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
ट्रिप एड्वाइजरका अनुसार युरोपमा सब भन्दा राम्रो पर्यटन गन्तव्यहरू
हामी केही युरोपमा पर्यटन स्थलहरू हेर्न गइरहेका छौं, स्मारकहरू र ठाउँहरू जुन यात्रुहरूका लागि आवश्यक छन्।
ट्राप एड्भाइजरका अनुसार स्पेनमा सब भन्दा राम्रो पर्यटकहरू
ट्राप एड्वाइजर पोर्टलका अनुसार स्पेनमा १० वटा उत्तम पर्यटक आकर्षणहरू पत्ता लगाउनुहोस्। ठाँउहरू जुन हामीले अर्को getaway को लागी लिख्नु पर्छ।
Places स्थान वा स्मारकहरू जलवायु परिवर्तनबाट खतरामा छन्
विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले पूर्वानुमान गरेका छन् कि २१०० सम्ममा समुद्रको सतह बढ्न र राख्न सकिन्छ ...
भ्याकेसनमा खाना विषाक्त हुनबाट बच्नका लागि सुझावहरू
वर्षको यस समयमा, विदेश भ्रमण धेरै सामान्य हुन्छ, विशेष गरी टाढाका र विदेशी गन्तव्यहरूका लागि। स्वाद ...
फ्रान्स मा यात्रा को लागी आकर्षक स्थानहरु
फ्रान्समा केहि सुन्दर र मनमोहक ठाउँहरू पत्ता लगाउनुहोस्, महलबाट मध्ययुगीन शहरहरू र काल्पनिक गाउँहरूको लागि मार्ग।
सम्झौता: ound२ यूरोबाट पेरिसको लागि राउन्डट्रिप उडानहरू
आजको अफरमा हामी तपाईलाई वास्तविक सम्झौताको लागि ल्याउँछौं: विभिन्न स्पेनी एयरपोर्टहरूबाट e२ यूरोबाट पेरिसको राउन्डट्रिप उडानहरू।
Andalusia को सुन्दर आकर्षक समुद्री तट
Andalusia मा हामी तपाईंलाई केहि राम्रा आकर्षक तटीय शहरहरू देखाउँदछौं। भ्रमण गर्न साना शहरहरूको चयन।
बेलफास्ट शहरमा के हेर्ने र के गर्ने
औद्योगिक र समस्याग्रस्त विगतको साथ, बेलफास्टको महान् शहरमा तपाईले देख्न र गर्न सक्ने सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्, आज यो आधुनिक शहर हो।
यस गिरावट भ्रमण गर्न गन्तव्यहरू
यस गिरावटमा प्राकृतिक गन्तव्यहरू, समुद्र तटहरू वा यूरोपियन शहरहरूमा यात्रा गन्तव्यहरू छनौट गर्न केही विचारहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
पेरूले माचू पिचूको पहुँचलाई यसलाई जन पर्यटनबाट सुरक्षित गर्न सीमित गर्नेछ
हामीले भर्खर कसरी भेनिसमा स्थानीय सरकारले प्लाजालाई बचाउन विभिन्न उपायहरू उठाए भन्ने बारेमा कुरा गर्यौं ...
ग्रेनाडा मा Alhambra जेनेरिफ उद्यानहरु नि: शुल्क को लागी खुल्छ
पछिल्लो वसन्तदेखि ग्रानडाको अल्हम्ब्राका प्रेमीहरूले सम्बन्धमा राम्रो समाचार पाएनन् ...
क्यामिनो डे स्यान्टियागो गर्नका लागि सुझावहरू
हामी तपाईंलाई केमिनो डे स्यान्टियागो यसको केही उत्कृष्ट चरणहरूमा गर्न तयारीको लागि केही उपयोगी सल्लाहहरू दिन्छौं।
तपाईंको छुट्टीमा ग्रामीण गन्तव्य छनौट गर्न कारणहरू
तपाईको अर्को छुट्टीमा ग्रामीण गन्तव्य छनौट गर्न केहि उत्तम कारणहरू पत्ता लगाउनुहोस्, प्रकृतिमा शान्त ठाउँ।
म्याड्रिडमा रोमान्टिक योजनाहरू
म्याड्रिड एक सहर हो जुन हामीलाई हेर्न र गर्न अनन्त चीजहरू प्रदान गर्दछ र यदि हामी दम्पतीको रूपमा गयौं भने ...
राहदानी र colorsको अर्थ के हो?
विदेश यात्रामा जाँदा, राहदानी हाम्रो परिचय पत्र हो। यसमा समावेश जानकारी ...
क्रूज यात्रा, व्यावहारिक सल्लाहहरू
क्रूजमा यात्रा गर्नु भनेको नयाँ अनुभव हो, त्यसैले हामीले केहि चीजहरू अगाडि नै जान्नुपर्दछ। हामी तपाईंलाई केही व्यावहारिक सल्लाह दिन्छौं।
म्याड्रिडमा १ best सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्म raतुहरू
गर्मीको समयमा म्याड्रिडमा केहि दिनहरू बिताउने अवसर पाएका व्यक्तिहरूले ती रातहरू प्रमाणित गर्न सक्षम हुनेछन् ...
न्यूयोर्कमा सर्वश्रेष्ठ खाना ट्रकहरू
क्लासिक जब यो न्यूयोर्कमा खाने कुरा आउँछ खाना ट्रक हो। स्ट्रीट फूड, तर विश्वका सबै स्वादहरू र राम्रो मूल्यहरूमा।
रोम यात्राको लागि व्यावहारिक सल्लाह
रोम शहर प्रत्येक वर्ष हजारौं पर्यटकहरु लाई आकर्षित गर्ने गन्तव्य हो, र यो कुनै छक्कलाग्दो कुरा होइन ...
स्पेनमा विभिन्न स्थानहरू भ्रमण गर्नुहोस् जहाँ गेम अफ थ्रोन्स फिल्म गरिएको छ
स्पेनका बिभिन्न ठाउँहरू भ्रमण गर्नुहोस् जहाँ गेम अफ थ्रोन्स फिल्म गरिएको छ: गुआडालजारा, गिरोना, सेभिल, सेक्रेस, पेस्कोला, आदि।
पर्यटन कर के हो र यो यूरोपमा कहाँ लागू हुन्छ?
जुलाई को महीनामा, बार्सिलोनाले भ्रमणका लागि नयाँ पर्यटक करलाई अनुमोदन गर्‍यो, जुन उनीहरूलाई थपिने छ ...
ट्राभल + लीजर पत्रिका श्रेणीकरणको 'शीर्ष १' मा भएको एक मेक्सिकन शहर
आजको लेखमा हामी तपाइँलाइ यात्रुहरूको लागि भर्खरको समाचारको एक टुक्रा ल्याउँछौं: मेक्सिकन शहर ट्राभल + लेजर पत्रिका श्रेणीकरणको शीर्षमा १ मा।
एक getaway को लागि9आकर्षक शहरहरु
स्पेनी भूगोलमा अवस्थित यी char वटा आकर्षक शहरहरू पत्ता लगाउनुहोस्, सानो कुनाहरू जहाँ त्यहाँ गेटवेमा हेर्न धेरै छ।
क्रूज days दिन MS 8eयुरो देखि MSC Splendida मा सवार
यदि तपाईं जहिले पनि क्रूजमा जान चाहानुहुन्छ र दुबै स्पेनिश र इटालियन शहरहरूमा जान चाहानुहुन्छ भने, यो तपाईंको मौका हो। 649 यूरो बाट यो तपाइँको हुन सक्छ!
२० गलिसिया II मा आकर्षक शहरहरु
यस सुन्दर भूमिमा घुम्न साना स्थानहरूको दोस्रो दोस्रो चयनमा ग्यालिसियामा अरू दश जना आकर्षक शहरहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
Ists पर्यटकहरूका लागि अनौठो स्थानीय सीमा शुल्क
यात्रा एक धेरै समृद्ध अनुभव हो। यसले दिमाग खुल्छ र बाँच्ने जीवनका अन्य तरिकाहरू जान्न अनुमति दिन्छ। हरेक राष्ट्र ...
२० गालिसियामा आकर्षक शहरहरू I
गालीलियाका २० आकर्षक शहरहरू मध्ये शीर्ष दश पत्ता लगाउनुहोस्। ठाँउहरू जुन साना कर्नरमा प्रस्ताव गर्न धेरै छ।
सुझावहरू र ब्याकप्याकिंगका लागि कारणहरू
केही कारणहरू पत्ता लगाउनुहोस् र ब्याकप्याकिंग यात्रा, नयाँ अनुभवको आनन्द लिनको लागि सबै केहि सुझावहरू।
महिलाका लागि वर्जित विश्वमा places ठाउँहरू
इतिहासभरि नै, दुर्भाग्यवस महिलाहरूलाई उनीहरूको सेक्सको कारण भेदभाव गरिएको छ र ...
इक्वेडरको विशिष्ट पोशाक
क्षेत्रको आधारमा इक्वेडरको विशिष्ट पोशाक पत्ता लगाउनुहोस्। त्यहाँ यात्रा गर्ने विदेशीहरूले कसरी लुगा लगाउँदछन्? पत्ता लगाउनू!
प्राग र बुडापेस्ट जान्नका लागि बार्गेन: 378 XNUMX यूरोबाट, आवास र उडानहरू
आजको लेखमा हामी तपाईलाई युरोपको मध्यमा प्रवेश गर्ने यात्राको प्रस्ताव ल्याउँदछौं: प्राग र बुडापेस्ट: 378 XNUMX युरो, आवास र उडानहरूबारे जान्नुहोस्।
बच्चाहरूसँग बिदाको आनन्द लिने योजनाहरू
बच्चाहरूसँग बिदाको आनन्द लिनको लागि विभिन्न योजनाहरूको आनन्द लिनुहोस्। यि आदर्श योजनाहरु हुन् यदि हामी एक परिवार को रूप मा यात्रा गर्न जाँदैछन्।
भारतीय संस्कृतिबारे जान्नुहोस् र हिन्दूको रीतिथिति पत्ता लगाउनुहोस् धर्म, ग्यास्ट्रोनोमी, चाडपर्व र हिन्दु संस्कृतिको अधिकमा।
युरोपमा natural प्राकृतिक साइटहरु सम्झना गर्न मिल्दैन
यूरोपमा सात अविश्वसनीय प्राकृतिक साइटहरू पत्ता लगाउनुहोस् तपाईंको अर्को छुट्टीमा हराउनको लागि मरुभूमिबाट तालहरू र समुद्र तटहरूमा।
ब्राजिलबाट विशिष्ट पोशाक
ब्राजिलको विशिष्ट पोशाक, र उनीहरूले लगाउने लुगा र वर्ष र क्षेत्रको आधारमा पत्ता लगाउनुहोस्। ब्राजिल को लुगा के हो? यहाँ खोज्नुहोस्!
विश्व यात्रा गर्न सबै भन्दा राम्रो र नराम्रो पासपोर्टहरू
विदेशमा यात्रा गर्दा प्रत्येक पर्यटकको मुख्य चिन्ताको एक भनेको यात्रा गर्नु हो कि ...
गर्मीमा गालिसियामा गर्नुपर्ने कुराहरु
गर्मीमा गालिसियामा गर्नसक्नुहुने सबै रोचक र रमाईलो चीजहरू पत्ता लगाउनुहोस्, गन्तव्य जुन बढ्दो लोकप्रिय छ।
डुरियन, संसारमा stinkiest फल
डुरियन संसारकै सबैभन्दा दुर्गन्धित फल मानिन्छ, यसको दुर्गन्ध के हो? हामी तपाईंलाई यस फलको सबै रहस्यहरू बताउछौं जुन एकदमै नराम्रो गन्ध आउँछ।
केवल समावेश गरीएको पुन्टा कानाको लागि C। ० यूरो, सबै समावेश छ
केवल 690। ० यूरोका लागि पौंटा काना यात्रा गर्नुहोस्, सबै समावेश छन् यो प्रस्तावको साथ जुन हामीले तपाईंको लागि रम्बो वेबसाइटबाट छनौट गरेका छौं।
यात्राको क्रममा परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने
यात्राको क्रममा परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल राख्न केही विचारहरू पत्ता लगाउनुहोस्। साना विवरणहरू पनि ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ।
सुझावहरू धेरै सस्तो उडानहरू प्राप्त गर्न
आज हामी धेरै सस्तो उडानहरू प्राप्त गर्न सुझावहरूको एक श्रृंखला प्रस्तुत गर्दछौं। In कुलमा यसले तपाइँ मात्र पैसा बचत गर्दछ तर समय पनि।
तपाईको कुकुर संग यात्रा को लागी दुनिया को लागी सल्लाहहरु
हामी तपाईलाई आफ्नो कुकुर संग संसार भर यात्रा गर्न को लागी केहि सल्लाह दिन्छौं, विचारहरु जुन तपाईलाई आफ्नो घरपालुवा जनावर संग छुट्टीमा जान सजिलो बनाउन सक्छ।
WorldPride मैड्रिड २०१,, गर्व पार्टीहरु को लागी निश्चित गाइड
जुलाई २ to देखि २ सम्म, म्याड्रिडसँग धेरै मनाउन बाँकी छ। आदर्श वाक्य अन्तर्गत «माया कसलाई तपाईं माया गर्नुहुन्छ, म्याड्रिड हुनेछ ...
फ्लाइ गर्नुहोस् र डेनिसियाको साथ ११118 यूरोबाट टेनेरिफमा बस्नुहोस्
आजको यो प्रस्तावमा हामी तपाईंलाई टेनेरइफको यात्रा गर्न सिफारिस गर्दछौं: फ्लाइ गर्नुहोस् र टेरेनिफमा डेस्टिनियाको साथ ११er यूरोबाट रहनुहोस्। तपाइँको छुट्टी को सक्दो फाइदा!
पोर्टो नजिक शहरहरू भ्रमण गर्नुहोस्
हामी तपाईंलाई पोर्टोको नजिकका शहरहरूमा यात्रा गर्नका लागि केही चाखलाग्दो विचारहरू देखाउँदछौं, ठूलो चासोको स्थानहरू जुन एक दिनमा भ्रमण गर्न सकिन्छ।
मालागा शहरमा के हेर्ने र के गर्ने
मालागा शहर स्मारकहरू, संग्रहालयहरू र समुद्र तट र शपिंग सडकहरू संग मनोरञ्जनको सही संघ हो जहाँ तपाईं दिन बिताउन सक्नुहुनेछ।
ब्राटिस्लावामा गर्मी दिनहरू
के तपाइँ ब्राटिस्लावामा रुचि राख्नुहुन्छ? के यो रहस्य र मध्य युग जस्तो देखिन्छ? त्यसकारण, यसलाई भ्रमण गर्नुहोस् किनकि तपाईं निराश हुनुहुने छैन: महलहरू, चर्चहरू, तालहरू र मध्यकालीन मेलाहरू।
ह्याम्बर्गमा हेर्न र गर्न को लागी चीजहरू
धेरै चीजहरू भेट्टाउने एक रमाईलो शहर, ह्याम्बर्गको जर्मन शहरमा तपाईले देख्न र गर्न सक्नुहुने सबै चीजहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
ब्याकप्याकिंग ट्रेन यात्राका लागि सुझावहरू
ट्रेनबाट यात्रा गर्ने केहि सुझावहरू र फाइदाहरू पत्ता लगाउनुहोस्, यातायात जुन यति लोकप्रिय छैन, तर यो राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
न्यूयोर्कको फिफथ एवेन्यूमा सबै भन्दा राम्रो पसलहरू
के तपाइँ न्यूयोर्कको भ्रमण गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र जान्न चाहानुहुन्छ कुन प्रसिद्ध फिफथ एभिन्यूमा सबैभन्दा राम्रो पसलहरू? ठीक छ, NY मा किनमेल गर्न हाम्रो मार्गदर्शक सम्झना छैन
रिभेर मायामा हेर्न र गर्नका लागि चीजहरू
रिभियारा मायामा त्यहाँ देख्न र गर्नलाई धेरै चीजहरू छन्, चट्टानहरूमा डुब्नेदेखि लिएर म्यान भग्नावशेष, पिरामिड चढ्ने वा सिनोट्समा पौडी खेल्ने सम्म।
यस गर्मीमा हराउनको लागि स्पेनमा १० समुद्री तटहरू
स्पेनमा १० उत्कृष्ट समुद्रहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामी यस गर्मीमा हराउन चाहन्छौं। उत्तरबाट दक्षिणमा टापुहरू हुँदै जाने एरेनालेसहरू।
युरोप २०१ in मा पर्यटन रुचिको कोर्डोबाको क्याथेड्रल-मस्जिद
स्पेन ती देशहरू मध्ये एक हो जुन हरेक वर्ष सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दछ यसको ग्यास्ट्रोनोमी, संस्कृति, ... को उत्कृष्ट संयोजनको लागि धन्यवाद।
ठाउँहरू एडिन्बर्ग भ्रमणमा हेर्नका लागि
सबै कुनाहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामी प्रस्ताव राख्छौं एडिनबर्ग भ्रमण गर्न, आकर्षण र स्मारकहरूले भरिएको शहर।
अधिक लामो उडानको लागि सुझावहरू
हामी तपाईंलाई लामो सुझावमा धेरै भन्दा धेरै बनाउन केही सुझावहरू दिन्छौं। सबै भन्दा उत्तम तरिका विमानमा ती सबै घण्टा।
निकारागुआ पत्ता लगाउँदै, मध्य अमेरिकी मोती
त्यहाँ केही गन्तव्यहरू छन् जुन थोरै पर्यटनले शोषण गरेको छ र निकारागुआ जत्तिकै सुन्दर र अतिथि सत्कार गर्न सक्छ। त्यहाँ ठूलो छ ...
म्याड्रिड बुक फेयर २०१ its ले यसको ढोका खोल्यो
एक बर्षमा म्याड्रिड पुस्तक मेले पासेओ डे कोचेरोस डेल पार्क डेलमा यसको ढोका खोल्यो ...
गैलिशियन Rías Baixas मा विशेष कुनाहरू
हामी गालिशियन रियास बाइक्ससका केहि विशेष कुनाहरू पत्ता लगाउनेछौं, भ्रमण गर्नका लागि झरना, टापु र महलहरू।
सुझावहरू तटमा तपाईंको छुट्टिहरूको मजा लिन
समुद्री किनारमा तपाईंको अर्को छुट्टीको आनन्द लिन केहि साधारण सल्लाहहरू पत्ता लगाउनुहोस्। विचारहरू सबै तयार छ र आश्चर्य नमान्नुहोस्।
म्याड्रिडबाट हवानाको राउन्ड ट्रिप मात्र 640० यूरोको लागि
आजको साप्ताहिक प्रस्ताव तपाईंलाई eDreams द्वारा प्रस्तुत गरिन्छ: म्याड्रिडबाट हवानाको ound०० युरोको लागि राउन्ड ट्रिप। कस्तो मोलतोल!
के हुन्छ यदि हामी बाँच्नको लागि यात्रा गर्न?
आजको लेखमा हामी तपाईंलाई सोच्न र प्रतिबिम्बित गराउँदछौं ... कुन भौगोलिक बिन्दु तपाईंले यात्रा मात्र नगर्ने, तर बस्न पनि रोज्नुहुन्छ?
Fun रमाईला संग्रहालयहरू बच्चाहरूसँग भ्रमण गर्न र यो गर्नका लागि सुझावहरू
मे १ On मा, अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय दिवस मनाइयो, सम्झनको लागि उत्तम मिति ...
इटालीको बोलोना शहरको भ्रमण गर्नुहोस्, के हेर्ने
एक पटक टावरहरूले भरिएको र अझै पनि यसको आर्केडहरूको लागि परिचित छ शहरको भ्रमणमा बोलोनामा के हेर्ने भनेर पत्ता लगाउनुहोस्।
सेशेल्सका सर्वश्रेष्ठ समुद्री तटहरू
हामी सेशेल्स द्वीपसमूह जाँदैछौं यसको केहि समुद्री तटहरू, हामीले अवश्य भेट्नु पर्ने र जान्नु पर्ने आवश्यक चीजहरू जान्न।
पिल्ग्रिम ट्रेन २०१ 2017 मा क्यामिनो डे स्यान्टियागो गर्न फर्किन्छ
पुरानो समयदेखि, पवित्र स्थानहरूमा तीर्थयात्रा धेरै धर्महरूमा सामान्य भएको छ। यी यात्रा कार्यक्रमहरूको एक अर्थ थियो ...
यो प्रस्तावको साथ, कर्डोबामा होटल बुक गर्नुहोस् र यसको मेला हेर्नुहोस्
यो प्रस्तावको साथ, कर्डोबामा एउटा होटल बुक गर्नुहोस् र यसको मेयर भ्रमण गर्नुहोस्, शहरले तपाईंको लागि राख्ने अन्य थुप्रै चमत्कारहरूका बीचमा यसको मस्जिद।
इटालीको शहर सियानामा के हेर्ने
Palio चाडका लागि परिचित शहर, इटालेली शहर सिएना मा तपाईले धेरै दिनहरूमा देख्न सक्ने सबै कुरा पत्ता लगाउनुहोस्।
Aix-en-Provence, फ्रान्स मा के हेर्ने र के गर्ने
Aix-en-Provence को सानो शहर फ्रान्स को दक्षिण मा एक साँच्चै मनमोहक स्थान छ, धेरै हेर्न र गर्न को साथ।
मसलादार र धेरै स्वादिलो, यो ग्रीक ग्यास्ट्रोनोमी हो
भूमध्य आहार एक स्वस्थ र सन्तुलित आहार को पर्यायवाची हो कि जो विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान गर्दछ को लागी ...
EDreams को साथ पाल्मा डे मल्लोर्का, राउन्डट्रिपका लागि सस्तो उडानहरू
EDreams को साथ पाल्मा डे मल्लोर्का, राउन्डट्रिपका लागि सस्तो उडानहरू ... मल्लोर्कालाई चिन्नुहोस् यदि तपाईंले यस अद्भुत प्रस्तावको साथ पहिल्यै नै गर्नुभएको छैन भने।
फ्रान्सको Carcassonne, के हेर्न को लागी यात्रा
Carcassonne वा Carcassonne शहर फ्रान्स को दक्षिण मा स्थित छ र एक धेरै राम्रो संरक्षित र धेरै सुन्दर मध्ययुगीन शहर हो।
Fuerteventura मा हेर्नको लागि
तपाईंले देख्न सक्नुहुने धेरै चीजहरू पत्ता लगाउनुहोस् र फुटेर्वेन्टुरा टापुमा, समुद्र किनारबाट प्राकृतिक परिदृश्य र आरामदायक शहरहरूमा।
बिदाको समयमा बचत गर्न सल्लाहहरू
हामी तपाईंलाई केहि सरल तरिकाहरू दिन्छौं बचाउनको लागि जब योजना र अर्को छुट्टीको मजा लिनुहोस्, जुन गन्तव्यमा।
Foods फूडहरू जुन तपाईं ब्युनोस आयर्समा रोक्न सक्नुहुन्न
ब्यूनस आयर्स? खानु! आप्रवासीहरूको शहरको रूपमा, सबै व्यंजनहरू प्रतिनिधित्व हुन्छन्, तर यी पाँच अमूर्त खानाहरू औंल्याउनुहोस्।
तपाईंको छुट्टीको समयमा कार भाँडामा दिनको लागि सल्लाहहरू
बिदाको लागि कम्पनी छनौट गर्न, तपाईंको छुट्टीको समयमा कार भाँडामा लिन तपाईंले जान्नुपर्ने सबै विवरणहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
लामो लामो सप्ताहन्त: उडान प्लस इस्तांबुलमा two 399। युरोका लागि दुई पटक
आज हामी तपाईंको लागि नयाँ प्रस्ताव लिएर आएका छौं जुन तपाईंको ध्यान आकर्षण गर्दछ: उडान प्लस इस्टानबुलमा दुईको लागि Dest 399eयूरो डेस्टिनियाको साथ रहनुहोस्।
बर्लिनमा निःशुल्क हेर्न free चीजहरू
बर्लिन शहरमा निःशुल्क हेर्नको लागि चीजहरूको सूचीको आनन्द लिनुहोस्, किनकि उत्तम चीजहरू कुनै शुल्क बिना नै उपभोग गर्न सकिन्छ।
केवलeयूरोको लागि म्याड्रिडबाट इबीसा यात्रा गर्नुहोस्
हामीले यो ठूलो सम्झौता फेला पारेका छौं: इड्रीम्समा over यूरो भन्दा बढीको लागि म्याड्रिडबाट इबीसा यात्रा। यस अवसरको फाइदा लिनुहोस्!
११ स्थानहरू तपाईंले अस्टुरियसमा देख्नुपर्दछ
अस्टुरियसमा ११ स्थानहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन तपाईंले मिस गर्न सक्नुहुन्न। प्रकृति पथबाट शहर, स्मारक वा साना शहरहरू।
छुट्टीको लागि १० सस्तो यूरोपियन गन्तव्यहरू
चाखलाग्दो र सस्तो शहरहरूको साथ तपाईंको अर्को छुट्टीको मजा लिन १० सस्तो यूरोपीय गन्तव्यहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
दक्षिणी इटालीमा the उत्तम समुद्री तटहरू
जब राम्रो मौसम आइपुग्छ हामी समुद्र तटमा जान चाहान्छौं, र हाम्रो क्षेत्रमा पहिले नै चिनिसकेकाले हामी ...
स्पेनमा सबैभन्दा विशिष्ट ईस्टर मिठाईहरू
पवित्र हप्ताको दौडान स्पेन परिवर्तन भएको छ। यस युरोपियन देश पत्ता लगाउन धेरै तरिकाहरू छन् या त मार्फत ...
Andalusia (II) मा ग्यास्ट्रोनोमिक भ्रमणहरू
यदि हिजो हामीले तपाईलाई And Andalusian प्रान्तहरुबाट स्वादिष्ट पदार्थहरू ल्यायौं, आज हामी तपाईलाई बाँकी चारहरुलाई: मालागा, ग्रेनाडा, अल्मेरिया र जानलाई बताउनेछौं।
रिक्विह्हर र कोल्मर, दुई आभूषणहरू अल्सासमा
रिकविहर र कोल्मर दुई शहरहरू हुन् जो आल्सासको पर्यटनको लागि रत्न बन्न पुगेका छन् उनीहरूको उत्कृष्ट आकर्षण र उनीहरूका काठका घरहरूका कारण।
Andalusia (I) का लागि ग्यास्ट्रोनोमिक भ्रमणहरू
आजको लेखमा हामी तपाइँलाई हाम्रो प्यारो Andalusia को गन्ध र स्वादहरू ल्याउँछौं। यहाँ Huelva, Cizdiz, Cordoba र Seville को विशिष्ट व्यंजनहरू जान्नुहोस्।
ITunes मा कसरी तपाईंको अधिशेष विदेशी मुद्राहरू प्रयोग गर्ने
आज हामीसँग केही उत्तम विचारहरू छन् यात्राबाट बाँकी रहेका विदेशी मुद्राहरूको फाइदा लिन। हामी उनीहरूलाई के गर्न सक्छौं?
यात्रा गर्दा आवश्यक यूरोपीयन संग्रहालयहरू
कुन यूरोपियन संग्रहालयहरु भ्रमण गर्न को लागी हेर्नुहोस्। सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू र चाखलाग्दो यात्रा मार्गहरूको साथ।
पत्ता लगाउनुहोस् जुन यस २०१ 10 मा संसारका १० वटा सर्वश्रेष्ठ समुद्रहरू छन्। एक धेरै रोचक सूची जुनमा सुन्दर रेतीले समुद्री किनारहरूको आनन्द लिने।
ला कलन्क ड एन भ एक आकर्षक समुद्र तट हो जुन फ्रान्सको मार्सिलेको बाहिरी छेउमा छ, यस अनुपम ठाउँको कुनै पनि विवरण नगुमाउनुहोस्।
माइग्रेसन भनेको जनसंख्याको विस्थापन हो जुन एक ठाउँबाट अर्को गन्तव्यमा पुग्छ। त्यहाँ कस्तो प्रकारका मानव बसाईहरू छन्?